Wejiga Labaad Ee Wadahadallada Somaliland Iyo Somaliya Oo Furmaya & Wufuuda Somaliland Oo Beri U Ambo-baxay | Salaan Media
Wejiga Labaad Ee Wadahadallada Somaliland Iyo Somaliya Oo Furmaya & Wufuuda Somaliland Oo Beri U Ambo-baxay
(SM-Hargeysa) – Caasimadda dalka Turkiga ayaa waxa toddobaadka kan xiga ka bilaabmaya wareega labaad ee wadahadallada Somaliland iyo Somaliya, kuwaasi oo wejigoodii koowaad ka dhacay isla dalkaasi.
Wararka Mareegta Salaanmedia helayso, ayaa sheegaya in wadahadalladu ay sidii loogu tallo-galay uga furmayaan dalka Turkiga toddobaadka soo socda.
Ilo-Wareedyada Salaanmedia.com ayaa sheegaya in qayb ka mid ah wufuuda Somaliland uga qayb-galay wareega labaad ee wadahadallada Somaliland iyo Somaliya ay Jimcaha beri u ambo-baxayaan dhanka dalka Turkiga, si ay ugu sii gogol xaadhaan furitaanka wadahadallada labada dawladood.
Warka ayaa intaa ku daraya in weftiga dhanka Somaliland ka socda qaybtooda koowaad ee beri baxaya ay ka mid yihiin Wasiirrada ganacsiga Dr Maxamed Cabdilaahi Cumar, Shaqada iyo arimaha bulshada Maxamuud Axmed Barre (Garaad), Wasiirka Madaxtooyadda Xirsi Cali Xaaji Xasan, Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Guurtida Siciid Jaamac Cilmi.
Warku wuxuu intaa ku darayaa, in Weftiga qaybtiisa labaad oo uu hogaaminayo Madaxwaynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ay ka deba taggi doonaan maalmaha fooda inagu soo haya.
Weftiga Somaliland ee beri u ambo-baxaya ayaa waxa ka mid ah wariyayaal iyo Sawir-qaadayaal ka mid ah Telefiishanka Qaranka Somaliland, kuwaasi oo soo tabin doona wadahadallada Somaliland iyo Soomaliya.